महँगी, युद्धको प्रभाव कि सरकारको लाचारी ? | आर्थिक अभियान
महँगी, युद्धको प्रभाव कि सरकारको लाचारी ?
२०७८ फागुन, २३
युक्रेनमा गत १ सातादेखि भइरहेको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा उथलपुथल ल्याइदिएको छ । पश्चिमा देशहरूले लगाएका प्रतिबन्धहरूका कारण रूसको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित बन्ने भएको हो । यस कारण इन्धनदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिन थालेको छ । नेपालमा त्यही बहानामा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढाउन थालिएको छ ।
महँगी बढ्नुको प्रमुख कारण सरकार नै हो । नेपाल आयल निगमले तेलको वितरण प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । सरकारले लगाएका विभिन्न कर र उसको आफ्नै बढी खर्च तथा तेलमा भएको झेलका कारण तेलको मूल्य बढाएको बढायै छ । यसको भाउ बढेपछि ढुवानी भाडा बढ्छ, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्छ र त्यसले अन्य वस्तुको मूल्य पनि स्वतः बढाउँछ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले भारतमा पनि कच्चा तेलको मूल्य प्रतिलिटर १५–२२ रुपैयाँ वृद्धि हुने बताइएको छ । भारतबाट तेल आयात हुने हुदा भारतमा हुने मूल्यवृद्धिले नेपालमा पनि तेलको मूल्य प्रभावित बन्ने देखिन्छ । अर्थात् अबको केही हप्तामा नै तेलको मूल्य २ सय पुग्न सक्छ ।
त्यस्तै खाने तेलको मूल्य कति बढ्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । युक्रेनबाट कच्चा तेल र तोरी ल्याउने गरिएकामा त्यहाँबाट यी सामान आउन सकेका छैनन् । अहिले पुरानो स्टक छ । त्यही स्टकको पनि मूल्य बढाइसकिएको छ । सरकारले पुरानो स्टक कति हो र नयाँ आयात कति हो भन्ने अनुगमन गर्ने गरेको छैन ।